Xafiiska Shiinaha ama sanduuqa keydinta waraaqaha guriga oo leh awood ballaaran ayaa la laalaabi karaa Soo saare iyo Badeecad | Huaguang
Xafiiska ama sanduuqa keydinta warqadda guriga oo leh awood ballaaran waa la laaban karaa
Cabir: 36cm * 28.5cm * 17cm
Sanduuqa ay wax ku jiraan, oo ah wax (waxyaabo badan ayaa tilmaamaya maqaal yar, wuxuu noqon karaa: xafiisyada xafiisyada, is qurxinta, xogta faylka, qalab yar, sharaabaadyo, surwaal iwm) ayaa la isu soo uruuriyaa, sida magaca ka muuqata loogu yeero kaydinta sanduuq.
Sanduuqyada wax lagu keydiyo, oo sidoo kale loo yaqaanno sanduuqyada qadiimiga ah, ayaa waxaa adeegsan jiray kooxaha qadiimiga ah maalmihii hore si ay ugu kaydsadaan qaybo ka mid ah waxyaabaha dhaqameed ee la qoday oo la kala soocay. Sanduuqyadan guud ahaan si adag ayaa loo tiriyaa, qaar waa weyn yihiin qaarna yar yihiin, laakiin badankood waa cabirka sanduuqa kabaha (farshaxanada la soo saaray inta badan way culus yihiin, cabbirka sanduuqa kabaha ayaa ah midka ugu habboon ee wax lagu qabanayo). Bulshada casriga ah, sanduuqyada wax lagu keydiyo ayaa si tartiib tartiib ah isugu beddelay "sanduuqyo kala duwan" oo la mid ah, kuwaas oo loo adeegsado in wax lagu xareeyo. Sanduuqyada wax lagu keydiyo ee kuyaala suuqa ayaa aad u badnaa, qiimahiisa jaban, faa iidooyin balaaran, aad ugu haboon in dadweynuhu adeegsado, sidaa darteed waxaa suuqa ku jira noocyo badan oo sanaadiiqda wax lagu keydiyo ah.
Macnaha kaydinta ayaa ah in la dhaafo meel macquul ah oo la adeegsado taas oo ah, in la gaaro ujeedada ah in si macquul ah oo wax ku ool ah loo isticmaalo booska. Sanduuqeena keydkeena ， in kasta oo ay le'eg tahay, dhab ahaantii waa la laaban karaa, taas oo keydineysa kharash fara badan oo maraakiib ah. . Qalabka waraaqaha dib ayaa loo warshadeyn karaa ka dib isticmaalka, kaas oo sidoo kale daboolaya baahiyaha ilaalinta deegaanka. Waxayna isticmaashaa boolal, sidaa darteed way fududahay oo dhakhso badan in la isu geeyo, uma baahnid inaad ka walwasho iibsashadeeda iyo inaad awoodi kari weydo inaad soo uruuriso. Guud ahaan waa isku-darka 2 isku-darka, oo lagu soo rogay filim yaraanaya, qiimaha waa mid aad u macquul ah. Sanduuqan wax lagu keydiyo ayaa ah midab adag, oo ku habboon keydinta dukumiintiyada xafiiska, laakiin sidoo kale ku habboon keydinta alaabta ee kabaha iyo dharka.Waxaad iibsan kartaa hal xirmo, mid xafiiskaaga ah iyo mid gurigaaga ah. Xafiiskaaga iyo gurigaaga ha ahaadaan kuwo hagaagsan oo hagaagsan. Mar dambe ka cabsan waxyaabaha meel ku yaal ma heli karo.
Xirmada baakadda birta, xasiloon oo adkaysi badan, ku rid xafiiska dhexdiisa jawi deggan, xafiiskana hoos uma soo jiidaneyso.
Cabirka 36cm * 28.5cm * 17cm wuxuu leeyahay awood balaaran wuxuuna xajin karaa waxyaabo badan.
Waxyaabaha ku qor waraaqda si aad si fudud ugu kala soocdid oo aad u raadiso.
Hore: Calaamadda Custom Handmade Paper Jewelry Box Qabanqaabiyaha oo leh Muraayadda Muraayadda Muraayadda Dhagaha Qurxinta
Xiga: Tayada sare daabacan miiska daabacaadda ururinta majaladda jiingado
Sanduuqa Hadiyadaha dhalashada
Sanduuqa Hadiyadaha Weyn
Sanduuqa Joogtada ah
dabool sanduuqa sharaabaadyada jiingado ee jiingado ...